William Ruto oo sheegay inuusan ka bixi doonin Jubilee ka hor doorashada guud | Star FM
Home Wararka Kenya William Ruto oo sheegay inuusan ka bixi doonin Jubilee ka hor doorashada...
William Ruto oo sheegay inuusan ka bixi doonin Jubilee ka hor doorashada guud
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo xalay waraysi gaar ah siiyay telefishinka KTN ayaa sheegay inuusan soo afjari doonin xubinimadiisa xisbiga talada haya ee Jubilee ka hor doorashada guud ee sanadka 2022-ka.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in isaga iyo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta hal mar ah la doortay sidaas awgeedna muddo xileedkoodu uu ku egyahay bisha sideedaad ee sanadka soo socdo.
Dr. Ruto ayaa sheegay inuu sida habboon u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo shaqooyinka uu madaxweynaha u igmado sidaas awgeedna uunan cabasho ka muujinayn gacan bidixeyn dadka qaar ay dareemayaan inuu wajahaya.
Xilli la weydiiyay wada shaqeynta kala dhexeysa madaxweyne Uhuru Kenyatta ayuu Ruto ka gaabsaday inuu ka jawaabo wuxuuna xusay in ay dhaqan xumo tahay in aad ka hadasho arrimaha qofka aad ku xigeen u tahay.
William Ruto ayaa ku celceliyay in la doonayo in aan lagu mashquulin qiimeynta xiriirka ka dhexeya hoggaamiyaasha ugu sarreeysa wadanka balse lagula xisaabtamo waxqabadkooda dhanka dhaqaalaha , kaabayaasha waddooyinka , waxbarashada , xiriirinta adeegga korontada iyo daryeelka caafimaad.
Previous articleDowladda oo sheegtay in 300 oo dhallinyaro ah ay ka soo baxeen Al-Shabaab
Next articleDHAGEYSO:Shacabka Kajiado oo doonaya in sare loo qaado tacliinta ismaamullada